လုံခြုံရေးသိကောင်းစရာ - SIP ကို ​​enable / disable လုပ်ပါ ငါက Mac ပါ
လုံခြုံရေးသိကောင်းစရာ - SIP ကို ​​enable / disable လုပ်ပါ
Javier Labrador | | လဲ tutorial
ဒီဟာနဲ့ "လုံခြုံရေးမှတ်ချက်" ရှိသည်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ် ဖြစ်နိုင်သမျှ malware များမှကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုကာကွယ်ပါ ဝဘ်ပေါ်မှ download ဖိုင်မှသော်လည်းကောင်း၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောစာမျက်နှာများကိုရှာဖွေခြင်းမှလည်းကောင်းရနိုင်သည်။
၎င်းသည် OS X El Capitan (အသစ်ဖြစ်သော macOS Sierra တွင်ပါရှိသည့်) အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ကာကွယ်မှုယန္တရားအသစ်ဖြစ်သည် SIPသို့မဟုတ် သမာဓိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်, ထို malware သည်အရင်းအနှီးဟုသတ်မှတ်ထားသောဖိုင်များကိုမပြောင်းလဲစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းမှာ "root files" ဟုခေါ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဤ command သည်တစ်စုံတစ်ယောက်အားကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် binary executions များကိုခွင့်မပြုခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒီအက်ပဲလ်လုံခြုံရေးစနစ်အသစ်တက်နေလားဆိုတာဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ပထမ ဦး စွာအချို့သောအခြေအနေများတွင်မှန်ကန်သော်လည်း၎င်းကာကွယ်မှု command ကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည် အချို့သောပရိုဂရမ်များ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း ဒီရွေးစရာကိုပိတ်ထားရန်လိုအပ်သည် (ဟုတ်ကဲ့၊ အရေးကြီးဆုံးအချက်များ၊ အန္တရာယ်များကိုသိထားခြင်း) ။ အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးပေါ် Apple OS X (OS X El Capitan နောက်ပိုင်းတွင်) ၏အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက၊ အောက်ပါအတိုင်းဒီ command ကို disable or enable လုပ်နိူင်တယ်။
ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပြီး Mac မဖွင့်မီ၊cmd + R ကို»သင်၏ကီးဘုတ်တွင်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား "recovery mode" သို့ယူသွားလိမ့်မည်။
ဒီ mode ကိုရောက်တာနဲ့၊ “ Utilities” ဆိုတဲ့အမှတ်အသားကိုအပေါ်ဘက်ကြည့်ရှုလျက်မြင်တွေ့နိုင်သည် α€α€°α€α€¬α€›α€―α€¶.
Command ကိုဖွင့်ရန်ရိုက်ထည့်ပါ csrutil ကို enable လုပ်ပါ, ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်စနစ်ရှိ SIP mode ကို enable လုပ်လိမ့်မည်။
အဲဒါကို disable လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင် Enter ခေါက်ပါ csrutil ကို disable လုပ်ပါ.
အောက်ဖော်ပြပါသတင်းစကားပေါ်လာသင့်သောကြောင့်သင်ယခု Mac ၏လက်ရှိကာကွယ်မှုအခြေအနေကိုသင်သိလိမ့်မည်။ System Integrity Protection ကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်ထားသည်။
ဤစာမူ၏အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းကိုဖွင့်ရန်အကြံပြုထားပါသည် SIP လုံခြုံရေးစနစ်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရွေးစရာကိုပိတ်ထားရန်မလိုအပ်ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကွန်ယက်ရှိလက်ရှိခြိမ်းခြောက်မှုများအားနည်းပါးစေရန်ကူညီရန်အလွန်အရေးကြီးသောကာကွယ်မှုယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်: iOS ဟက်ကာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » လုံခြုံရေးသိကောင်းစရာ - SIP ကို ​​enable / disable လုပ်ပါ
Allan nuñez ဟုသူကပြောသည်
ငါ filevaul (encryption mode) ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး disk ကိုစာဝှက်ပြီးအောင်မအောင်မြင်ဘူး၊ ရလဒ်တွေမရတဲ့အပြင်၊ ငါ့ MacBook ကိုသုံးစရာမလိုပဲနှစ်ပတ်ကြာသွားတယ်။
Terminal တွင်၎င်းကို disable လုပ်ရန်မည်သည့် command ကိုပြောနိုင်ပါသလဲ။
Apple Music သည် Spotify ကိုအနိုင်ရရန်စီစဉ်နေပြီး၎င်းမှရရှိလာသောအဖိုးအခများတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်
Apple Q2 ရောင်းအား၊ တရုတ်သို့ Apple မှလှူဒါန်းမှု၊ တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်အမှောင်စနစ်နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ SoydeMac တွင်တစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး